တရုတ် ဓါတုပစ္စည်း စက်ရုံပေါက်ကွဲသဖြင့် လူအများအပြားသေဆုံး၊ ရာချီဒဏ်ရာရ | Akonthi
တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းရှိ ဓါတုစက်ရုံတစ်ခုမှာ ယမန်နေ့က ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် သေဆုံးသူမြင့်တက်နေပြီး ၄၄ ဦး သေဆုံးကာ ၆၄၀ ဦး ဒဏ်ရာရသွားခဲ့တယ်လို့ တရုတ်မီဒီယာတွေက ဖော်ပြပါတယ်။ တရုတ် Tianjiayi ဓါတုပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီကပိုင်ဆိုင်တဲ့ ယမ်ချန်မြို့ရှိ စက်ရုံမှာ ယမန်နေ့ နေလယ်ပိုင်းက ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ စက်ရုံမှာ ဓါတ်မြေသြဇာတွေ ထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပြီး မီးလောင်ပြီးနောက် ပေါက်ကွဲမှုတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ တရုတ်အာဏာပိုင်တွေက ပြောပါတယ်။
ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ချိန်မှာ ၂ ဒသမ ၂ မဂ္ဂနီကျူအဆင့်ရှိ မြေငလျင်လှုပ်ခတ်မှုမျိုးတွေလည်း ရှိနေခဲ့တယ်လို့ တရုတ်ငလျင်တိုင်းတာရေး အဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်စက်ရုံအတွင်းရှိ အဆောက်ဦးတွေ ထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့ကြောင်း၊ ပေါက်ကွဲမှုပြင်းထန်ပြီး စက်ရုံအတွင်းက အလုပ်သမားတွေ ပိတ်မိနေခဲ့ကြောင်း သတင်းတွေက ဆိုပါတယ်။ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားချိန်မှာ စက်ရုံအမိုးတွေ ပြိုကျခဲ့ပြီး တံခါးမကြီးတွေ ပြတင်းပေါက်တွေလည်း ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ စက်ရုံဝန်ထမ်းက ပြောပါတယ်။ မီးလောင်မှုကိုတော့ နေ့လည်သုံးနာရီမှာ မီးသတ်သမားတွေက ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ တရုတ်အာဏာပိုင်တွေက ပြောပါတယ်။ တရုတ် စက်မှုလုပ်ငန်း၊ စက်ရုံတွေမှာ မကြာခဏ ဘေးအန္တာရယ်ဖြစ်မှုတွေ ရှိနေပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံ Zhangjiakou. မြို့မြောက်ပိုင်းမှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလက ဓါတုပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် ၂၂ ဦးသေဆုံးကာ ၂၂ ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတုန်းကလည်း စီချွမ်ပြည်နယ် အနောက်တောင်ပိုင်းရှိ ဓါတုပစ္စည်း စက်ရုံမှာ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် ၁၃ ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
တရုတျ ဓါတုပစ်စညျး စကျရုံပေါကျကှဲသဖွငျ့ လူအမြားအပွားသဆေုံး၊ ရာခြီဒဏျရာရ
တရုတျနိုငျငံအရှပေို့ငျးရှိ ဓါတုစကျရုံတဈခုမှာ ယမနျနကေ့ ပေါကျကှဲမှုဖွဈခဲ့တာကွောငျ့ သဆေုံးသူမွငျ့တကျနပွေီး ၄၄ ဦး သဆေုံးကာ ၆၄၀ ဦး ဒဏျရာရသှားခဲ့တယျလို့ တရုတျမီဒီယာတှကေ ဖျောပွပါတယျ။ တရုတျ Tianjiayi ဓါတုပစ်စညျးထုတျလုပျရေး ကုမ်ပဏီကပိုငျဆိုငျတဲ့ ယမျခနျြမွို့ရှိ စကျရုံမှာ ယမနျနေ့ နလေယျပိုငျးက ပေါကျကှဲမှုဖွဈခဲ့ပါတယျ။ အဆိုပါ စကျရုံမှာ ဓါတျမွသွေဇာတှေ ထုတျလုပျတာဖွဈပွီး မီးလောငျပွီးနောကျ ပေါကျကှဲမှုတှေ ဆကျတိုကျဖွဈလာခဲ့တယျလို့ တရုတျအာဏာပိုငျတှကေ ပွောပါတယျ။
ပေါကျကှဲမှုဖွဈခြိနျမှာ ၂ ဒသမ ၂ မဂ်ဂနီကြူအဆငျ့ရှိ မွငေလငျြလှုပျခတျမှုမြိုးတှလေညျး ရှိနခေဲ့တယျလို့ တရုတျငလငျြတိုငျးတာရေး အဖှဲ့ကဆိုပါတယျ။ ပေါကျကှဲမှုကွောငျ့စကျရုံအတှငျးရှိ အဆောကျဦးတှေ ထိခိုကျပကျြစီးသှားခဲ့ကွောငျး၊ ပေါကျကှဲမှုပွငျးထနျပွီး စကျရုံအတှငျးက အလုပျသမားတှေ ပိတျမိနခေဲ့ကွောငျး သတငျးတှကေ ဆိုပါတယျ။ ပေါကျကှဲမှုဖွဈပှားခြိနျမှာ စကျရုံအမိုးတှေ ပွိုကခြဲ့ပွီး တံခါးမကွီးတှေ ပွတငျးပေါကျတှလေညျး ပကျြစီးခဲ့တယျလို့ စကျရုံဝနျထမျးက ပွောပါတယျ။ မီးလောငျမှုကိုတော့ နလေ့ညျသုံးနာရီမှာ မီးသတျသမားတှကေ ထိနျးခြုပျနိုငျခဲ့တယျလို့ တရုတျအာဏာပိုငျတှကေ ပွောပါတယျ။ တရုတျ စကျမှုလုပျငနျး၊ စကျရုံတှမှော မကွာခဏ ဘေးအန်တာရယျဖွဈမှုတှေ ရှိနပေါတယျ။ တရုတျနိုငျငံ Zhangjiakou. မွို့မွောကျပိုငျးမှာ ၂၀၁၈ ခုနှဈ နိုဝငျဘာလက ဓါတုပစ်စညျးထုတျလုပျတဲ့စကျရုံ ပေါကျကှဲမှုဖွဈခဲ့တာကွောငျ့ ၂၂ ဦးသဆေုံးကာ ၂၂ ဦး ဒဏျရာရခဲ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ၂၀၁၈ ခုနှဈ ဇူလိုငျလတုနျးကလညျး စီခြှမျပွညျနယျ အနောကျတောငျပိုငျးရှိ ဓါတုပစ်စညျး စကျရုံမှာ ပေါကျကှဲမှုဖွဈခဲ့တာကွောငျ့ ၁၃ ဦးသဆေုံးသှားခဲ့တယျလို့သိရပါတယျ။